“အတွေးစလေးတွေ”: ဒီဇင်ဘာမိုး . . .
ဒီဇင်ဘာမိုး . . .
မနေ့က ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲ ဒီဇင်ဘာဆောင်းတွင်းကြီးမှာ မိုးတွေရွာပါတယ်။ ဒီနေ့လည်း တစ်နေ့ခင်းလုံး မိုးတွေတဖွဲဖွဲကျနေလေရဲ့။ သြကာသလောကကြီးလည်း ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ မပြောတတ်တော့ပါ။ လောလောဆယ်တော့ ဆောင်းတွင်းကြီးမှာ မိုးကာအင်္ကျီထုတ်ဝတ်ပြီး ရာသီတော်ဦးကို ခပ်ကြောင်ကြောင်ပဲ ရင်ဆိုင်လိုက်ရပါတော့တယ်။
ရာသီဖောက်ပြန်တာကြောင့် ဒီဘက်နှစ်တွေမှာ မုန်တိုင်းတွေကလည်း နံမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ လောကသားတွေဆီကို မကြာမကြာ အလည်လာကုန်ကြပါတယ်။ နာဂစ်၊ ဆူနာမီ၊ ဘစ်ဂ်ျလီ ကုလားလိုတစ်မျိုး စပိန်လိုတစ်ဖုံ အမျိုးတွေစုံစုံနဲ့ ကိုယ်တို့ကို နှုတ်ခွန်းတော်တွေ ဆက်သလို့ မရိုးနိုင်အောင် ကြည်စယ်တော်မူရက်ကြပါပေတယ်။ ရာသီတွေဖောက်ဆို သစ်တောတွေလည်း ပျောက်သလောက်ရှိကုန်ကြပြီ မဟုတ်ပါလား။
ကမ္ဘာ့မြေလွှာက ရသမျှ မြေပေါ်၊ မြေအောက် သယံဇာတတွေကို တိုးတက်တဲ့နည်းပညာအကူအညီနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာထုတ်လိုက်ကြ သုံးလိုက်ကြတာ အခုဆိုရင် ခန်းမယ့်အရေးကိုတောင် တွေးပြီးပူနေရပါပကောလား။ ကိုယ်တို့တစ်သက်တောင် ဒါတွေကုန်မှာစိုးနေရရင် နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ မလွယ်ရေးချမလွယ်တာ သေချာနေပေါ့။ ခက်တာက ဖောက်ပြန်လွန်းတဲ့ ဒီရာသီသဘာဝကို ပြုပြင်ကြဖို့ဆိုတာကလည်း ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း သစ်ပင်တွေစိုက်၊ လေထုသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေလို့ ရတာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်နေတာပါပဲ။
ကိုယ်ကတော့ ပညာရေးသမားဖြစ်တာကြောင့် ဒါတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ လူတွေအားလုံး ပညာတတ်ရမယ်လို့ပဲ ကောက်ချက်ချမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပညာတတ်ခွေးမြီးတွေ ဖြစ်ကုန်ကြရင်လည်း တတ်တဲ့ပညာအားကိုးနဲ့ ကမ္ဘာကိုဖျက်မယ့် ပညာရှင်ကြီးတွေ ဖြစ်ကုန်ကြရင်လည်း ဆေးအတွက်လေးကုန်ပါဦးမယ်။ ဒါကြောင့် လူတွေကို ပညာရော၊ အသိပါ တွဲပြီးပေးနိုင်ရင် လှပတဲ့လောကသစ်(အားလုံးရဲ့ အိပ်မက်ထဲက ကမ္ဘာ) ကို တည်ဆောက်နိုင်မှာ မလွဲတော့ပါ။
အင်း...မနက်ဖြန်သို့မဟုတ် ဘယ်သောခါများ ဖြစ်နေမလားတော့ မပြောတတ်တော့...
Posted by Han Kyi at 3:33:00 am
သွားရကံကြုံ . . .
ခရစ်တော်နှင့် ပိုက်ဆံအ်ိတ် . . .
ခြင်္သေ့လည်ပြန် . . .
လွမ်းတတ်သလိုလွမ်းမိသည် . . .
အလှူ . . .
ရင်လေးတယ် . . .
ဥယျဉ်မှူး၏ သောကများ . . .